Thermostat Mechanical: izinhlobo, izimiso yokusebenza ukufakwa. Amath- Ukushisa boilers
Ukuxhashazwa imishini HVAC yesimanje kuqediwe ngaphandle kokusebenzisa amath-. Lezi amadivayisi ezincane lapho umsebenzisi angakwazi ukulawula imingcele sezulu. Ikakhulukazi, amadivayisi njenge asetshenziswa amasethi phansi Ukushisa izinhlelo, air-conditioning, iziteshi kubhayela, nokunye. D. Namuhla ungathola emakethe izesekeli Ukushisa izinhlelo, ezihlukahlukene idivayisi ukusebenza, kodwa thermostat mechanical ubhekwa ikhambi ezingabizi kakhulu, elula futhi enokwethenjelwa kule ingxenye.
Umgomo we operation zedivayisi
onobuhle Classical yalolu hlobo usebenza isimiso ekushintsheni isakhiwo izinto ezithile ku isizinda ngokwandisa noma ukunciphisa lokushisa. Kulokhu sikhuluma igesi Izingxube, oyenze ngaphakathi isakhiwo. Ngaphansi kwethonya lokushisa ekushintshashintsheni uyanda noma ukunciphisa ivolumu esigabeni ukugcwaliswa, equkethe ketshezi asebenzayo. Lezi zinqubo nje ayisukumele ulwelwesi ebucayi, okwenza izinguquko ezifanele ukufundwa. Ngesikhathi esifanayo i-Ukushisa thermostat Mechanical ukhonza hhayi kuphela abonisa izinga lokushisa wamanje kodwa Lisenza umsebenzisi ukuthi lilungiselele idivayisi for uhlelo umsebenzi othize. Advanced control edluliselwe, isibonelo, lingacushwa, nakuba isimiso yokusebenza sisasebenza ikakhulu onobuhle electronic.
Isici esiyinhloko imodeli ukwehlukana lolu hlobo ubhekwa ngendlela ukufaka, nakuba akusiyo ebaluleke kakhulu ngokuya ezicashile tekusebenta. Noma kunjalo, abakhiqizi ngokwabo ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana odongeni namayunithi uyahlanganyela. Lokho ngowokuqala bafakwe niche odongeni futhi cishe uhlangane ne ebusweni ikhwele kungenziwa aboshelwe yokubeka noma isakhiwo ekhethekile asekelayo. Nalapha futhi, ngokuya ezisebenza sibaluleke kakhulu khona noma ukungabi khona ukulawula inzwa microclimate. Ejwayelekile thermostat mechanical inalokhu unesimo esifana ukuthi inquma lokushisa, ngqo izindlu zalo. Nokho, onobuhle yesimanje ngisho uhlobo mechanical indlela ngokuya ezivamile kokulandela kanye nemingcele ezikude microclimate. Lokhu kusho ukuthi i-thermostat sehlukaniswe tincenye letimbili: inzwa, ukulungisa lokushisa ukufundwa ngilungele ukufakwa nokulawula udlulisela.
Izici models boilers
Boiler izinhlelo izinjongo zasekhaya kubhekwa ongomunye wemishini eyinkimbinkimbi kunazo esigabeni Ukushisa imishini. Ngenxa yalokho, i-thermostat kufanele isebenze anhlobonhlobo yokusebenza nemingcele. Ngaphezu kwalokho, kuyinto balondoloze boilers avame ukusetshenziswa ezimbili kanye imodeli ezintathu-siteshi. Bavumela ukuthi eceleni ukulawula ongakhetha nje ehlukene, kodwa, eqinisweni, namadivayisi. Umfanekiso wale ndlela kungaba idivayisi kanyekanye elawula imisebenzi ngokuqondile ngesimo kubhayela omlilo ekamelweni, futhi ngendlela ehlukile - kubhayela amanzi Ukushisa ukufakwa. Ngaphezu kwalokho, amath- ngoba ngokuvamile Ukushisa boilers ayatholakala nge izinzwa akude futhi ehlelwe.
Ekuhloleni afanele endabeni ethile izilungiselelo thermostat kufanele bacabangele izici eziningana. Base amandla umthwalo is ultimate, kodwa amath- okufanayo Ukushisa boilers lesi sibalo 3.5 kW kuyinto ngempela okungahambi kahle ngoba enamandla kakhulu umthengi iyunithi, ngakho kwaba lula kule ukukhetha lapho.
kubaluleke kakhulu ukubala elilungile lokushisa amabanga, okungaba ukusebenzisa ukuguqulwa esithile. Ngokwesibonelo, iningi amayunithi zasendlini has a esikalini sika-0 kuya ku-40 ° C. Kodwa uma kunesidingo ungathola version nemnandi ububanzi ezimbi nge-avareji ka-degree 10-15. Enye ipharamitha ezibalulekile - umzimba impahla. thermostat Mechanical ngokuvamile eyenziwe ngepulasitiki, kodwa ezindaweni nokhahlo kufanele sicabange ukuthi singakwazi yini usebenzisa isibonelo metal, nakuba kuba usinde ngokuvamile ezibizayo.
Imakethe inikeza inala izixazululo zonke izidingo, kufaka phakathi nezidingo ukulawula kubhayela. Ikakhulu, i-thermostat mechanical TDC 1 Ballu nomkhiqizi umise ngokwaso at ukubonga kwayo engcono ukusebenza, nokwethenjelwa quality Yakha. Nokho, lokhu imodeli inebanga esincane okushisa ezisebenza kusuka 10 kuya 30 ° C, ngakho ayikwazi asondele kunoma kubhayela.
Okuningi amathuba lokushisa imibuso ukulawula Electrolux inkampani inikeza umugqa yayo Basic ETB. Futhi banake iziphakamiso yizinkampani Devi, UKUSHISA-PRO, TIMBERK nge TMS ukulungiswa nokunye. D. Kodwa, uma singazinaki esikalini lokushisa, indinganiso thermostat mechanical Ballu uwine umncintiswano ngenxa price tag yayo ongaphakeme ruble 700.
Indlela ukufaka kudivayisi?
Ngokuyinhloko wayenza amalungiselelo, okungase ukudala nasembonini udonga uhlobo besifazane. Ngaphezu kwalokho cabling liyangquzulwa. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi, ngaphezu yokuxhuma main ukunikezela umugqa, lolu cingo kufanele abhanqiwe nge imishini. Enye into ukuthi okufanayo wire lwezimpawu kungagwenywa ngokuthenga imodeli engenantambo. Ngokwesibonelo, convectors esine thermostat mechanical isivele version eziyisisekelo anemisila amadivaysi umsakazo, ekuqedeni kokuhlupheka nge ukufakwa. Kodwa isimiso ukuxhumana okungenantambo ne ukuphathwa nokwesekwa ngesankahlu-in, hhayi wonke amayunithi futhi lokhu ehilelekile kufanele kubhekwe kusengaphambili. Kuyefana nasendleleni izindlela ufakile inzwa kude, nakho kudinga isikhathi ngokucophelela amaphuzu ezikhethekile for nenkanuko edlulele. Enye into ukuthi ukungenela inzwa odongeni ayidingekile. Ngokwanele ukuba akwazi ukulungiselela ubakaki obandayo, okuyinto lihlelwe ku umzimba ezincane. Zonke ihadiwe kudingekile lolu hlobo ngokuvamile noma kufakwe amath-.
Indlela yokusebenzisa i-thermostat mechanical?
Ngokushesha emva kokufakwa, kuzomele unike amandla imishini ukuze izinga lokushisa elikhulu for the maphakathi no-range. Ungalindeli okusheshayo ukuthola izinkomba kwesokudla - kubhayela, isibonelo, kungase kuthathe amahora ambalwa kuya version. ukusebenza Ngaphezu kwalokho kuzoncika amakhono idivayisi. Ngokwesibonelo, mechanical Igumbi thermostat elula kuhilela kuphela kungenzeka ukunika amandla / ukukhubaza c ukuhlela isimo oyifunayo okwamanje. Okuningi onobuhle eyinkimbinkimbi kungenziwa amisiwe ngeviki noma ngenyanga wokusebenza nge ushintsho ngokuzenzekelayo yokusebenza imingcele kuye ngokuthi isimo sezulu ngaphandle noma isikhathi sosuku. Le nqubo isebenza ngohlobo izingxenye, "ikhaya smart '.
Ngaphansi kwesimo ubhubhane lwe kwathatha ezobuchwepheshe kungase kuzwakale kuyindida yokufuna idivayisi lokukhanda. Kodwa lokhu kungase kube nezizathu ezinhle. Endaweni yokuqala kakhulu ngokuzijamela isisetjenziswa se-elektroniki kusukela isimiso umsebenzi unezela ukuthembeka kuye. Ngaphezu kwalokho, onobuhle zaloluhlobo zinzima engabizi futhi akuzona njengoba nozwelo ukuphazamiseka e wiring. Labo convectors ne-thermostat mechanical ngeke ziphazamiseke uma kwenzeka yokwanda amandla noma sindisa inethiwekhi. Kodwa kufanele acabangele ezintweni ezingezinhle isinqumo esinjalo. I nemibi Mechanics ochwepheshe bathi yonke le iphutha degrees 2-3 bese ugcwalisa nozwelo ukushaqeka ngokomzimba. Ngokwesibonelo, ngisho Bump okuncane kungathinta ukunemba ukufundwa esikhathini esizayo. Kodwa uzokwenza kufanele kuphawulwe nesifiso abakhiqizi ukunciphisa lezi nobubi obuthile. Lokhu kufakazelwa ukunemba okuthuthukisiwe ngokusebenzisa isici base yesimanje, futhi yabe izakhiwo enamathela ovikelayo ngamanzi-oxosha anti-ukushaqeka impahla.
Ingcindezi Water reducer - isiqinisekiso ukuphepha izindlela zokuphakelwa kwamanzi
Ukuhlaziya Krylov "hide" inganekwane: umkhiqizo, lamanje ezweni lanamuhla
Ukuvimbela i-Ebola. Ebola: izimpawu, ukwelashwa